ရခိုင်ဒေသ ဆန္ဒပြပွဲများကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကူညီပေးနေသည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ကို လက်မခ?? - Yangon Media Group
ရခိုင်ဒေသ ဆန္ဒပြပွဲများကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကူညီပေးနေသည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ကို လက်မခ??
ရခိုင်ဒေသရှိဆန္ဒပြပွဲများကို ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီမှအကူအညီပေးပြီး ဖန်တီးနေသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ကို လက်မခံ ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက် ဗဟန်းမြို့နယ် သံလွင်လမ်းရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဌာနချုပ်တွင် ပြုလုပ်သည့်ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ပဲ။ ပြည်သူလူထုက သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်တဲ့နေရာ တွေမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကနေ ပိုက်ဆံပေးပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင် အထောက်အထားပြပါ။ အထောက်အထားရှိလား။ ကောလာဟလတွေလား။ စွပ်စွဲချက်တွေလား။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ သူတို့ဆန္ဒကို သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ပြခွင့်မရှိဘူးလား။ အဲဒီမေးခွန်းပဲ ကျွန်တော်ပြန်မေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့ရပ်တည်ချက် ကတော့ ကြေညာချက်တွေမှာကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆန္ဒပြ ပွဲတွေကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးကဖန်တီးနေပါတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်မျိုး၊ ကောက်ချက်ချမှုမျိုးကို ကျွန်တော်တို့လက်သင့်မခံပါဘူး”ဟု ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ထွက်ပြေးသွားသည့်ဘင်္ဂါလီများအား မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်လက်မခံရန် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မြို့များတွင် အောက်တိုဘာ၂၂ ရက်က ဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြသူများက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးသွားကြသည့်ဘင်္ဂါလီများအား မြန်မာအစိုးရကပြန်လည်လက်မခံရန်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့က မြန်မာအစိုးရအား ဘင်္ဂါလီများကိုလူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲချက်များမှာမမှန်ကန်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများကို ၁၉၈၂ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အမြန်ဆုံးစိစစ် ပေးရန်စသည်ဖြင့် အစိုးရအားတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။